Na-Akwado | January 2022
Ọdịnihu nke Ezigbo Ọdịmma Na Usoro Mmụta Ọgbara ọhụrụ
Taa ụwa na-enwe ọtụtụ mgbanwe nke VR kpatara, na mgbanwe ndị a nwere ohere niile ịme mgbanwe dị mkpa na usoro agụmakwụkwọ nke oge a.
Iweghachite data EaseUS, Ọkachamara Iweghachite data kacha mma 2020!
EaseUS Data Recovery Wizard n'efu na-enyere gị aka ịgbake vidiyo ngwa ngwa, akwụkwọ, foto na ihe ndị ọzọ sitere na data ehichapụ, furu efu ma ọ bụ nkebi ahaziri, site na desktọpụ gị, laptọọpụ gị, yana draịva flash na-ewepu ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Otu esi emepụta ma wepu ndị ọrụ Windows ọhụrụ na Windows 10
Lee otu esi emepụta ma jikwaa akaụntụ Microsoft, ayszọ iji chebe ha gụnyere usoro iji hichapụ / wepu akaụntụ onye ọrụ na Windows 10
Etu ị ga-esi nwetakwa faịlụ ehichapụ na Windows 10
Ehichapụ ngwa ngwa ụfọdụ faịlụ ndị dị mkpa ma ọ bụ folda si lapotp? Echegbula onwe gị ebe a bụ ụzọ dị iche iche iji weghachite faịlụ ehichapụ na Windows 10, 8.1 na 7!
Best 5 Windows 10 Paswọdu Iweghachite Ngwaọrụ 2020
Lee ihe kacha mma 5 Windows Password Recovery Tools ị nwere ike iji tọgharịa ma ọ bụ gbanwee echefuru okwuntughe nke komputa gị na-agba ọsọ Windows 10, 8.1 na 7
Olee otu iji tọghata DVD na Windows 10 maka n'efu (Idozi DVD na-egwu egwu)
Nzọụkwụ site na ntuziaka iji tọghata nchịkọta DVD ochie gaa na usoro Digital site na iji WinX DVD Ripper Platinum n'efu! (idozi DVD adịghị egwu nsogbu)
Olee otú Dịghachi ehichapụ faịlụ site na Windows 10, 8.1 na 7?
Inweta nsogbu na-agbake ehichapụ faịlụ site na gị Windows laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa, na-Recoverit Data Recovery gị onye-nkwụsị ngwọta na-agbake ehichapụ data
Olee otu iji tọghata WPS ka DOC, DOCX ma ọ bụ PDF site na iji onlineconvertfree
Na-achọ WPS ntụgharị iji gbanwee WPS Documents ka doc, docx ma ọ bụ PDF? Ebe a iji onlineconvertfree ị nwere ike tọghata wps ka doc na ibudata na mfe 3 setps
Ndabere na Iweghachite Software maka Windows 10
Enwere ọtụtụ ụzọ iji kwado PC gị Ebe a anyị edepụtarala ụdị ndabere dị na Windows 10
Ihe 5 kpatara Windows 10 Kọmputa na-eji nwayọ agba ọsọ
You hụrụ Windows 10 Kọmputa na-agba ọsọ nwayọ? Ndị a bụ ihe kpatara 5 nke a nwere ike ime na otu esi ewepụ windo 10 maka arụmọrụ ka mma
iBeesoft Data Iweghachite na ikike Ikike ruru $ 49.95
iBeesoft Data Iweghachite Nchekwa na ike data mgbake software, na-enyere iji naghachi gị ehichapụ, formatted ma ọ bụ furu efu faịlụ site na kọmputa, mpụga HDD, SSD, USB, kaadị ebe nchekwa, dijitalụ igwefoto, wdg
Mpempe akwụkwọ eji Aghọ Aghụghọ Ule Iji Ghọta Protocols VPN
Usoro nzuzo VPN dị ezigbo mkpa na ị kwesịrị ịma banyere ha. Maka ọdịmma gị, anyị mepụtara VPN Protocol Cheat Sheet.
Wzọ 5 Zoo Ọnọdụ Gị N'ịntanetị (Nọrọ na-enweghị aha)!
Izobe ọnọdụ gị n'ịntanetị bụ ụzọ dị mkpa karịa ụfọdụ n'ime gị nwere ike iche. Yabụ, iji nyere gị aka zoo ọnọdụ gị n'ịntanetị, lee ụzọ ise kachasị mma iji mee nke a.
Nyochaa ngwaahịa - Ndozi nke kpakpando maka nnweta
Ntuziaka A na Z na-eduzi ndị ọkwọ ụgbọala na Windows 10, 8.1 na 7
Gịnị bụ ọkwọ ụgbọala, gịnị ka njikwa ngwaọrụ pụtara na otu o si arụ ọrụ? Ebe a Ngwaọrụ njikwa pụtara, nkọwa & nkọwa!
Olee otú iji tọghata & mpikota onu 4K Videos ka MP4 na Window 10
Esi ewepu windo windo 10 OS na laptọọpụ na desktọọpụ PC
Lee ụzọ abụọ nkwado ndabere na mpaghara Windows 10 OS si ewu na Mepụta Windows 10 System Image atụmatụ na iji nke atọ ịba uru CloneGo na-enyere ndị ọrụ nkwado ndabere na mpaghara Windows usoro nkebi dị ka abịakọrọ faịlụ.
Mee Ka Azụmaahịa Gị Nwee Nchekwa na Atụmatụ 10 Cyber ​​Security a
N’ebe a, anyị agbakọgoro 10 dị mfe Ntanetị ma ọ bụ Atụmatụ Cyber ​​Security 2019 iji melite ọnọdụ nchebe cyber nke nzukọ gị Mee ka azụmahịa gị ghara ịda mbà site na ndị na-agba ọsọ, ndị spammers na ndị ọzọ.
Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere PPTP VPN
PPTP Okwey bụ otu n'ime ihe ndị kasị nkịtị na mfe idokwa VPN ụdị. Ka anyị chọpụta otú o si eme nke ọma ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ.
Wzọ 3 iji kpochapụ draịvụ ike na Windows 10 PC
Ọ bụrụ na ị na-ere ma ọ bụ na-enye kpamkpam Kọmputa gị, gbaa mbọ hụ na ị nwetara data dị nro gị. Lee, anyị edepụtarala ụzọ dị iche iche iji kpochapu Kọmputa Ike gị
© 2022 jf-oeiras.pt | AmụMa Nzuzo